चीन घर व्यायाम जिम कसरत खेल गैर पर्ची कस्टम मुद्रित पर्यावरण मैत्री नयाँ TPE फिटनेस योग मैट निर्माता र आपूर्तिकर्ता | NQ
दुबै पक्ष मा विशेष चिपचिपा गैर पर्ची बनावट र सामान्य योग मैट भन्दा उच्च घनत्व, उत्कृष्ट कर्षण र उच्च पकड, सबै भन्दा राम्रो योग को धेरै प्रकार को अभ्यास गर्न को लागी प्रदान गर्दछ। काठ भुइँ, टाइल भुइँ, सिमेन्ट भुइँ, टिकाऊ, कुनै लेटेक्स, आँसु प्रतिरोध को उच्च शक्ति, नमी प्रतिरोधी मा गैर पर्ची।
1. पर्यावरण अनुकूल 6p मुक्त वा अन्तर्राष्ट्रिय प्रमाणीकरण संग
2.100% recyclable र biodegradable।
3. शायद ही गंध जब यो प्रयोग गर्न थालेको छ।
4. बलियो कर्षण र उच्च कुशन।
6. डबल तह दुई टोन रंग संग चित्रित।
अभ्यास को सबै प्रकार को लागी उत्कृष्ट किनकि यो टिकाऊ, लामो समय सम्म चल्ने सामग्री को makde हो।
यो योग चटाई सबैभन्दा सामान्य र सबैभन्दा व्यापक रूप बाट प्रयोग गरिएको प्रकार हो। योग स्टुडियो, स्कूल, फिटनेस क्लब, घर र आउटडोर मा पाउन सकिन्छ।
बच्चाहरु यसलाई मा खेल्न सक्छौं, हामी पनि टिभी हेर्न को लागी यो सीट गर्न सक्छौं।
कुनै पीवीसी र कुनै विषाक्त phthalates छैन, त्यसैले यो न केवल वातावरण को लागी राम्रो छ तर स्वस्थ को लागी तिमी।
हल्का र उच्च क्रूरता, टिकाऊ बोक्न सुविधा संग प्रयोग गर्न को लागी।
पनरोक र धूल-प्रमाण, सफा गर्न सजिलो।
राम्रो लोच र उच्च तन्यता शक्ति, शरीर र जमीन को बीच पीडा कम गर्न सक्नुहुन्छ।
हाम्रो उच्च व्यायाम मैट तपाइँको योग कसरत को लागी आराम थप्नेछ। हाम्रो बाक्लो गैर पर्ची म्याट योग को सबै प्रकार को लागी राम्रो हो, विशेष गरी पुनर्स्थापना पोज को लागी।
एक योग झोला संग एक हटना फिल्म मा एक टुक्रा, एक कार्टन मा4टुक्राहरु
हामी मानिसहरु को एक योग हो कि योग को भावना मा काम गर्दछौं। तपाइँको सन्तुष्टि हाम्रो लक्ष्य हो। हामी market.Our र बन्द सेल सामाग्री को हाम्रो अनूठा संयोजन पनी पनी पनी सही मिश्रण प्रदान गर्दछ मा घनी मैट को पेशकश गर्व छ। पकड र संयुक्त बचत घनत्व को अवशोषित मैट रंगहरु को एक किसिम मा आउँछ बलियो र जीवन्त, तर तिनीहरुको चमक मा सशक्त छैन।
अघिल्लो: २०२१ तातो बेच्ने थोक पोर्टेबल पिलेट्स योग स्टिक घर जिम व्यायाम को लागी
अर्को: थोक मांसपेशी खेल फोम व्यक्तिगत प्रशिक्षक शक्ति समायोज्य कास्ट फलाम Vinyl डुबकी Neoprene डम्बल
घर व्यायाम जिम कसरत